Izihambeli zesigcawu sokuncibilikisa indle kusale amanzi ebesesi-UKZN.
Bekunomhlangano wokucobelana ngolwazi kwezokwakha ubudlelwano bezomhlaba kwezokuhlanzwa kwendle eSikoleni Sobunjiniyela e-Nyuvesi yaKwaZulu-Natali (e-UKZN).
I-Cranfield University yase-Bedfordshire, eNgilandi, ibihlele umhlangano wezinsuku ezimbili, ngokubambisana ne-University of Witwatersrand ne-Pollution Research Group (i-PRG) yase-UKZN lapho bekukhona ongoti, abacwaningi nabasebenzisana nabo emkhakheni wokuhlanza isidadada sendle nokucwaninga amathuba akhona ukusincibilikisa kusale amanzi angasetshenziswa nokubheka amathuba akhona ocwaningo olungenziwa.
UDkt Tosin Somorin wase-Cranfield uthe: ‘Ezindaweni eziningi emhlabeni indle ayikhucululwa, okuholela ezifweni. Ukuhlanza indle ukuze kusebenze amanzi ayo kunesidingo ezweni nasemphakathini ukuze kube namanzi kuwonkewonke, okudinga izindlela ezihlukile nezintsha zokuphatha, ukuqoqa, nokusebenzisa udoti wendle.’
Kulo mhlangano bekunezethulo zongoti ngocwaningo lokubutha indle nokunye ukungcola, kugxilwe ezibonelweni zaloko osekwake kwenzeka. Izingxoxo bezigxile ekubhekeni loko okufanele kube seqhulwini ocwaningweni nokwenza izindlela zokubambisana ekuncibilikiseni udoti wendle, ikakhulu emsebenzini osahlongozwa womxhaso we-Grand Challenge Research Fund wase-United Kingdom.
Bekugxilwe ezindleleni ezintsha zokwenza imikhiqizo ewusizo neyongayo kadoti wendle. Kube nohambo oluya e-Black Soldier Fly Plant eSiphingo.
UDkt Santiago Septien Stringel wase-UKZN uthe: ‘I-Black Soldier Fly Plant yindawo yokuhlanza izibi zendle ezindlini ezincane ezisemabaleni (izindlu ezincane eziyimigodi). Udoti wendle udliwa yizimpethu zezimpukane ezimnyama, eziqhumayo bese zibulawa zingakabi yizimpukane eziphelele. Izimpethu ezibulawayo kube sekumuncwa amafutha kuzo angasebenza emikhakheni yokuzicwala nokukhiqiza amandla kagesi.
‘Inqwaba yaloko okusalayo inamaphrotheni angasetshenziswa ukuphakela imfuyo emapulazini. Ingcosana yezibi zendle esalayo ingasetshenziswa njengomquba noma isetshenziswe njengamalahle ngemva kokwenziwa kwawo,’ kusho u-Santiago.
UNks Ruth Cottingham weKhanyisa Projects uthe uhlomule lukhulu kulo mhlangano. ‘Kuhle ukuhlangana nabantu ubuso nobuso ukuqinisa ubudlelwano nabantu abasemkhakheni ofana nowakho nokuthekela ulwazi ngezindaba zokuhlanza udoti,’ kusho yena.
Amagama nesithombe: ngu-Zolile Duma